Green: ပုံပြင် သုံးပုဒ်
Posted by Green on , Labels: ပုံပြင် |3comments
သူတို့အိမ်မှာ ကြက်ရယ်၊ ၀က်ရယ်၊ နွားရယ် သတ္တ၀ါ(၃)ကောင်ကို ကျွေးမွေးထားသတဲ့။
ဒီကျွေးတဲ့အစာတွေကို သူတို့မွေးထားတာမဟုတ်တဲ့ ကြွက်တစ်ကောင်ကလာရောက်စားသောက်နေတာမကြိုက်ဘူးတဲ့။
ဒါကြောင့် လယ်သူမကြီးကမြို့ရောက်တုန်း ကြွက်ထောင်ချောက်ဝယ်လာသတဲ့။
” ကိုကြက် လယ်သူမကြီးတော့ကြွက်ထောင်ချောက်ဝယ်လာပြီ၊ ကိုကြက်သတိထားဦး၊မဟုတ်ရင်
ဒုက္ခရောက်နေမှာဆိုးလို့…” ဆိုပြီးပြောသတဲ့ ကြက်ကိုပြောသတဲ့။
” ကြွက်ထောင်ချောက်ဝယ်တာ ငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လည်းတဲ့။ မင်းသာသတိထားနေတဲ့။
မင်းသတိပေးချင်ရင် ကိုဝက်ကိုသွားပြော…”ဆိုပြီး ၀က်ဆီလွှတ်လိုက်သတဲ့။
ဒီလိုနဲ့နွားကလည်း ” ဒီကြွက်ထောင်ချောက်ကိုတက်နင်းမိရင်၊ ငါ့ခြေထောက်ဘာမှဖြစ်မဖြစ်ယုံမကဘူး၊
ဒီလိုနဲ့ တနေ့မှာ အိမ်နောက်ဖေးမှာချောက်ဆိုပြီး အသံကြားလို့ ယာသူမကြီးသွားကြည့်တဲ့အခါမှာ
ကြွက်ထောင်ချောက်မှာ သတ္တ၀ါတစ်ကောင်မိနေသတဲ့..။ကြွက်မဟုတ်ပေမဲ့ ဘာကောင်မှန်းသိအောင်
သေသေချာချာအနားကပ်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာ မြွေကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်နေလေတယ်။ မြွေကြီးကလည်း
ဒီအခါမှာ ယာသူမကြီးမှာ မြွေဆိပ်တက်ကာ အိပ်ယာထဲမှာလဲ…ဆေးဆရာခေါ်ရပါတော့တယ်…။
အရပ်ထဲကသူတွေလာကြည့်ကြရင်း ညစာချက်ဖို့အချိန်ရောက်လာတော့ အလျှင်မမှီတာနဲ့ အိမ်အောက်က
ကြက်ကိုရိုက်ချက်ပြီး ဧည့်သည်တွေကိုကျွေးပါတယ်..။ ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့မနက်မနက်မှာ ရွာနီးခြောက်စပ်က
ဆွေမျိုးတွေလာတော့လည်း လယ်သမားကြီးက အလုပ်ရှုပ်နေတာကြောင့် အိမ်က၀က်ကိုချက်ကာကျွေးပြန်ပါရော…။
လယ်သူမကြီးဆုံးတော့ နွားကိုချက်ကာ ရက်လည်လိုက်သတဲ့..။
ပင့်ကူရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို လူ ၃ယောက်က တွေ့ခဲ့ကြပြီး ပထမလူက “ဟင်း.. ငါ့အဖြစ်ကလည်း ပင့်ကူနဲ့ အတူတူပါပဲလား? ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ဘာမှ အကျိုးမရခဲ့ဘူး” လို့ ပြောပြီး သက်ပြင်းအခါခါ ချခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် ပထမလူရဲ့နေ့ရက်တွေဟာ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း တွေနဲ့ပဲ ပြည့်နေခဲ့တယ်။
ဒုတိယလူက “ဒီပင့်ကူ တော်တော် တုံးပါလား? ဘေးက ခြောက်နေတဲ့ နံရံကနေ ပတ်ပြီးတက်သွားလို့လည်း ရရက်သားနဲ့၊ ပင့်ကူလို ငါ တုံးလို့ မဖြစ်ဘူး” လို့ တွေးမိတယ်။ အဲဒီနောက် သူဟာ စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ပြီး ထက်မြက်လာခဲ့တယ်။
တတိယလူက ” အဖန်ဖန်ပြုတ်ကျပေမယ့် အထက်ကိုရောက်ဖို့ ဒီပင့်ကူ ဇွဲမလျှော့ခဲ့ဘူး” ဆိုပြီး သူဟာ ဘာလုပ်လုပ် ပင့်ကူလို ဇွဲလုံ့လ၊ တောင့်ခံအားတွေ ကောင်းခဲ့တယ်။
ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ ပုံပြင်တွေ ပြန်ချရေးလိုက်ပါသည်။
ပုံပြင်လေးတွေ ကောင်းတယ် မောင်အောင်မင်းရေ။
ဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့ ပြည့်ဝနေတဲ့ လောကကြီးမှာ တန်ဘိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို ဦးနှောက်သုံးပြီး ကျော်ဖြတ်သင့်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဝက်ဝံလိုများ ဖြစ်နေသလားလို့လည်း တွေးမိပါတယ်။